Saint Lucia, nke ghọrọ mba nwe obodo nweere onwe ya na February 22, 1979.
Ebe obibi Bi
Isi obodo (Castries) dị n'akụkụ ugwu nke agwaetiti ahụ ma na-anọchite anya ihe ruru 40% nke ndị bi.
Obodo ndị ọzọ gbara ama gụnyere Vieux-Fort na Gros-Islet.
Ihu igwe na Ihu Igwe
St Lucia nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ, nke ebe okpomọkụ n'afọ niile, nke ikuku ikuku ugwu ọwụwa anyanwụ guzobere. A na-eme atụmatụ okpomọkụ kwa afọ n'etiti 77 Celsius F (25 Celsius C) na 80 Celsius (27 Celsius C).
Nlekọta ahụike nyere na mba niile. E nwere iri atọ na atọ (33) Health Centers, atọ (3) ọha n'ụlọ ọgwụ, otu (1) onwe n'ụlọ ọgwụ, na otu (1) psychiatric.
Afọ agụmakwụkwọ malitere na Septemba wee kwụsị na July. E kewara afọ ahụ ụzọ atọ (Septemba rue Disemba; Jenụwarị ruo Eprel na Eprel ruo July). Banye na ụlọ akwụkwọ agwaetiti ahụ chọrọ ka e nye gị transcript transcript na akwụkwọ ọmụmụ nke ụlọ akwụkwọ ndị gara aga.
Egwuregwu ndị a ma ama na agwaetiti bụ egwuregwu, bọọlụ (bọọlụ) tennis, volleyball, na igwu mmiri. Ndị egwuregwu anyị a ma ama bụ Daren Garvin Sammy, onye isi ndị West Indies Twenty20 Team; Lavern Spencer, elu elu na Dominic Johnson, osisi vault.
Atụmatụ Pụrụ Iche
Pitons bụ ugwu ugwu mgbawa abụọ nwere ebe anyị ji nweta ihe nketa ụwa na St Lucia, nke otu igwe akpọrọ Piton Mitan na-ejikọ. Ugwu abụọ ahụ dị na ugwu Piton nwere ike ịbụ foto kachasị mma n'àgwàetiti ahụ. Ikpọ obot emi okokponde ke ẹkot Gros Piton ndien enye eken ke ẹkot Petit Piton.
Sulfur Springs a ma ama bụ mpaghara kacha ekpo ọkụ ma na-arụ ọrụ geothermal dị ala na Antilles Naa. Ogige ahụ dị ihe dị ka hekta 45, a na-akwụkwa ụgwọ ya dị ka naanị ọkụ na-agbọpụ Caribbean. Enwere ọdọ mmiri ọkụ mmadụ mere ebe ndị bi n’obodo na ndị ọbịa na-emegiderịta onwe ha maka ihe na-agwọ ọrịa nke mmiri nwere mineral.
Saint Lucia nwere ndiiche inwe onu ogugu Nobel Laureates kwa onye isi na uwa. Derek Walcott meriri Nobel Nrite na Literature na 1992 na Sir Arthur Lewis meriri Nobel Nrite na Economics na 1979. Ndị mmeri abụọ ahụ na-eketa otu ụbọchị ọmụmụ nke Jenụwarị 23, naanị afọ 15.
Onu ogugu ozo
Ọnụ ọgụgụ: Ihe dị ka 183, 657
Mpaghara: 238 sq kilomita / 616.4 sq km
Asụsụ Asụsụ: Bekee
Asụsụ Obodo: French Creole
GDP kwa Capita: 6,847.6 (2014)
Agụmagụ Akwụkwọ ọgụgụ: 72.8% (Onuogugu 2010)
Ego ego: Dollar Caribbean na mpaghara (EC $)
Ọnụego mgbanwe: US $ 1 = EC $ 2.70
Mpaghara Oge: EST +1, GMT -4